MACLUUMAAD: Hurricane Florence Telefoonka Zap - Relief Aid Aid Masiibada
MACLUUMAAD: Hurricane Florence Phone Zap
Home/updates/MACLUUMAAD: Hurricane Florence Phone Zap
Maaddaama Hurricane Florence ay ku soo wajahan tahay bariga Xeebta 170,000 dadka ka dambeeya baararka waxay si toos ah ugu socdaan jidka iyada oo aan lahayn awood lagu daadgureeyo Woqooyiga Carolina, South Carolina, iyo Virginia.
Waxaan u baahanahay caawintaada inaad culeys saarna gobol kasta si aan u hubino argagax leh oo ka dhacay FCI Beaumont intii lagu jiray Hurricane Harvey dib ha u dhicin. Durba hal xabsi oo aan ognahay oo ku yaal aagga daadka ayaa diidaya in laga daadgureeyo.
Si dhakhso ah looga baxo maxaabiista oo dhan ee xabsiyada.
Kaydinta Biyaha iyo Cuntada xarun kasta.
Markaad jawaab ka hesho tweet @FightXPrisons! (Ama emayl ahaan [Email ilaaliyo])
ALSO- Kuma aamini karno WAAXDA Asluubta. Per Jailhouse Lawyers talooyinka talo, “Haddii aad taqaanid maxaabiis ku sugan dariiqa duufaantan, waa muhiim to u sheeg inay buuxiyaan wixii weel ama bacaad ah BILAASH !! Xabsiyada ayaa caan ku ah bixinta maxaabiista biyo ku filan oo ay siinayaan maxaabiista haddiiba ay jiraan wax walba oo ka dambeeya biyaha wasaqeysan.
Tiro aad u fara badan ayaa laga yaabaa inaad lahesho saaxiibo qaarna qeybsano!
Nambarrada Loo Waco
Qaybta 'Badbaadada Dadweynaha' ee North Carolina (Twitter- @NCPublicSafety)
Khadka guud ee DOPS- 919-733-2126
Qeybta Guud ee Khadka Asluubta - (919) 838-4000
Weydiiso inaad la hadasho Xafiiska Agaasimaha Lassiter.
Waaxda Asluubta ee South Carolina (Twitter- @SCDCNews)
Agaasimaha Wakaaladda- Bryan P. Stirling —- 803-896-8555
Waaxda Asluubta ee Fiktooriya (Twitter- @VADOC)
Nambarka Guud- 804-674-3000
Riix 0 menu oo weydii in laguu gudbiyo kaaliyaha agaasimaha.
Kaliya VA daadguraynta hada ah- Xarunta Asluubta Indian Creek.
Xafiiska Federaalka ee Maxaabiista
Xafiiska Dhexe ee Gobolka Atlantic (North Carolina iyo Virginia) - 301-317-3100
Xafiiska Gobolka Koonfur-bari (South Carolina) - 678-686-1200